ကလေးတွေမှာ အာဟာရချို့တဲ့မှုရဲ့ လက္ခဏာ (၅)ခု - Chit MayMay
Home Child Care ကလေးတွေမှာ အာဟာရချို့တဲ့မှုရဲ့ လက္ခဏာ (၅)ခု
မိဘတိုင်းက မိမိတို့ကလေးကို ပျော်ရွင်ပြီး ကျန်းမာတဲ့ ဘဝကိုသာ ပေးချင်ကြပါတယ်။ ထို့ကြောင့် မိမိတို့ကလေးဟာ အာဟာရ မှန်မှန်ကန်ကန် ရရှိရရှိလားဆိုတာ သေချာစေဖို့ ကြိုးစားကြပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကလေးတွေအတွက် အာဟာရချို့တဲ့မှုက သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကို အကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေနိုင်လို့ပါ။ သို့သော် သင့်ကလေးအတွက် အပြည့်အဝမျှတဲ့ အစားအစာကို ထောက်ပံ့ပေးဖို့က အမြဲတမ်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ သင့်ကလေးမှာ အာဟာရဓါတ်နည်းနေရင် သင်ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
ဒီအတွက် သင့်ကလေးမှာ အာဟာရ(သို့) ဗီတာမင် လုံလောက်မှု ရှိ/မရှိဆိုတာ သိစေဖို့ တိကျတဲ့ လက္ခဏာတွေကို ရှာဖွေဖို့လိုပါတယ်။ သို့မှသာ သင့်ကလေးရဲ့ ချို့တဲ့မှုကို သင့်လျော်စွာ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှာပါ။ ဒါကတော့ သင်တွေ့နိုင်တဲ့ အာဟာရချို့တဲ့မှု လက္ခဏာအချို့ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ အာဟာရမဖြစ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို တပ်မက်နေခြင်း
သင့်ကလေးဟာ မြေဖြူတွေကို စားရတာ ကြိုက်နေသလား? ခဲတံက ခဲဆံတွေ ဝါးချင်တဲ့ စိတ်ရှိနေသလား? အာဟာရမဖြစ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို တပ်မက်ခြင်းက သံဓါတ်ချို့တဲ့ခြင်း လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကလေးမှာ ဒီလက္ခဏာတွေပြနေပါက ကလေးရဲ့အစားအစာမှာ သံဓါတ်ပါတဲ့ အစားအစာကို ထည့်သွင်းပါ။ ဘေဘီလေးတွေအတွက် စီရီရယ်၊ အနှစ်တိုက်ထားတဲ့ အသားနှင့် ပဲတွေကဲ့သို့သော သံဓါတ်ပါတဲ့ အစားအစာတွေကို ကျွေးပါ။ ကလေးအကြီးတွေဆိုရင် အနီရောင်အသား၊ ငါး၊ ကြက်သား၊ အစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် ပဲတွေက သံဓါတ်ကောင်းကောင်း ရနိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေ အထူးသဖြင့် လမ်းလျောက်ခါစကလေးတွေဟာ စွမ်းအင်အစုအဝေးဖြစ်ပြီး ချစ်စဖွယ်ကောင်းတဲ့ အပြုအမှုတွေနဲ့ hyperactive (အလွန်အကျွံတုံ့ပြန်မှု) လေးတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ သို့သော် တစ်ခါတရံမှာ သူတို့ရဲ့ hyperactive က ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ရနိုင်ပါတယ်။
လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ADAD ခံစားနေရတဲ့ ကလေးငယ်တွေကို အူဘက်တီးရီးယား တိုးတတ်စေဖို့ သူတို့အစားအသောက်ထဲမှာ မိုက်ခရိုအာဟာရဓါတ်တွေ မိတ်ဆက်တဲ့အခါ သိသိသာသာတိုးတတ်မှုရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနှင့် မညီညွတ်တဲ့အူက သင့်ကလေးရဲ့ ပုံမှန်မဟုတ်သော hyperactive bouts တွေကို အထောက်အကူပြုနိုင်ကြောင်း ဒီအရာက ပြသနေပါတယ်။ ဒိန်ချဉ်ကဲ့သို့သော သဘာဝ ပရိုဘိုင်အိုတစ်ပါဝင်တဲ့ အစားအစာတွေကို မိတ်ဆက်ပါ။ ဆရာဝန်နှင့်လည်း စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ ကလေးဆရာဝန်က ပရိုဘိုင်အိုတစ်ဖြည့်စွက်ဆေးတွေကို မိတ်ဆက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
သုတေသနအရ အစောပိုင်းဘဝမှာ ဗီတာမင် B12 ချို့တဲ့သော ကလေးတွေဟာ အချို့သော ဖွံ့ဖြိုးမှု နှောင့်နှေးခြင်းတွေကို ခံစားရပါတယ်။ ဗီတာမင် B12 ပါဝင်မှုနည်းသော ကလေးငယ်တွေဟာ အက္ခရာ မှတ်သားမှု၊ ခံစားချက်တွေ အနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်မှုနှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းမှုဆိုင်ရာ သိမြင်မှုစမ်းသပ်ချက်တွေမှာ အခက်အခဲတွေ ကြုံတွေ့ရပါတယ်။
ဒီချို့တဲ့မှုကို ကျော်လွှားဖို့ သင့်ကလေးအား ကြက်၊ ငါး၊ နို့နှင့် ကြက်ဥတို့ကို ကျွေးပါ။ B12 အပင်အရင်းအမြစ်မရှိတာကြောင့် ဆရာဝန်နှင့် စစ်ဆေးပြီး ဒီဗီတာမင်ကို သင့်ကလေးအား ပေးနိုင်ပါတယ်။
၄။ သွားတွေ ပြွတ်သိပ်ပြီး ပေါက်နေခြင်း
အချို့သော လေ့လာမှုများအရ ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရချို့တဲ့ခြင်းက သွားတွေ တစ်ခုပေါ် တစ်ခုထပ်ပြီး ပေါက်လာနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လေ့လာမှုက သွားထပ်ခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းကို သုတေသနလုပ်ခဲ့ကြပြီး စွမ်းအင်-ပရိုတိန်းကင်းမဲ့ခြင်းက လူတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်နှာအရိုးဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် တိုးတတ်မှုကို ယိုယွင်းစေတယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါက သွားတွေအားလုံးကို မပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ သေးငယ်သော သွားဖုံးနှင့် မေးရိုးတွေမှာ ဖြစ်ပေါ်စေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သွားထပ်တာတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီပြဿနာရဲ့ အရင်းအမြစ်က အထူးသဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလအတွင်းမှာ ပြုပြင်ထားတဲ့ အစားအစာများ စားသုံးခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပြုပြင်ထားတဲ့ အစားအစာတွေကိုရှောင်ကြဉ်ပြီး သင့်ကလေးအတွက် သဘာဝအစားအစာတွေသာ ကျွေးပါ။
မိဘတွေက ကလေးတွေအား အထူးသဖြင့် ညဘက်မှာ သွားပိုးစားတာကို ရှောင်ရှားဖို့ သကြားလုံးများများ မစားဖို့ ပြောလေ့ရှိပါတယ်။
သုတေသနပြုချက်အရ ကလေးတွေမှာ ဗီတာမင် ဒီချို့တဲ့ခြင်းက သွားပိုးစားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဗီတာမင်D ရဲ့ အကောင်းဆုံးရင်းမြစ်က သဘာဝ နေရောင်ခြည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်D ဟာ အူအတွင်းကယ်လစီယမ် စုပ်ယူရာမှာ ကူညီပေးပါတယ်။ ထို့အပြင် အရိုးနှင့်သွားတွေ ကျန်းမာသန်စွမ်းဖို့အတွက် ကယ်လ်ဆီယမ်က ဘယ်လောက်အရေးကြီးကြောင်း ကျွန်မတို့ အားလုံးသိကြတာ မဟုတ်ပါလား။ ဗီတာမင်ဒီချို့တဲ့မှုကို ကာကွယ်ဖို့ သင့်ကလေးအား နေရောင်ခြည်ထိတွေ့မှု အလုံအလောက်ရရှိအောင် ကူညီပါ။ ဗီတာမင် ဒီပါဝင်တဲ့ ကျန်းမာသော အချိုရည်တွေ တိုက်ပါ။
မကြာခဏ ဖျားနာခြင်း၊ ဆံပင်နှင့် အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်း စတဲ့အခြားသော အာဟာရချို့တဲ့ခြင်း လက္ခဏာများလည်း ရှိပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ အဝလွန်ခြင်းက အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အာဟာရတွေနဲ့ ဗီတာမင် မလုံလောက်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ကလေးအား ကူညီဖို့ ဒီအာဟာရချို့တဲ့ခြင်း လက္ခဏာတွေကို သတိထားမိရန် အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဆရာဝန်နှင့်လည်း စစ်ဆေးပါ။ သဘာဝအရင်းအမြစ်တွေ မရရှိခဲ့ပါက သင့်တော်တဲ့ ဖြည့်စွက်စာတွေဖြင့် ထိုအားနည်းချက်တွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။
Previous articleကလေးငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေကို လျစ်လျူရှုခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုး(၈) ချက်
Next article၅နှစ်မှ ၈နှစ်အထိ ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးတွေရဲ့ အပြုအမှုများ